Umnikazi webhayisikili wanamuhla kubalulekile ukugcina izimoto zakhe ezinamasondo amabili esimweni esifanele. Ngendlela ehamba ngayo futhi ngekhwalithi futhi ngesikhathi esifanele ibhayisikili isebenza, akuxhomeki kuphela ekutheni ushayela, kodwa nakwezempilo ngisho nangomphefumulo webhayisikili.
Kubaluleke kakhulu ngezikhathi ezithile ukufuna usizo oluvela kubachwepheshe abazokwazi ukuletha ibhayisikili endaweni yayo evamile. Noma kunjalo, kubalulekile ukuba kancane kancane ujabulele amakhono okuzilungisa nokulungisa ibhayisikili.
Kulula nje ukulungisa nokugcina ibhayisikili ngaphandle kokusebenzisa amathuluzi namathengi athile. Uhlu oluyisisekelo lwamathuluzi kufanele lutholakale kubo bonke abahamba ngebhayisikili abanomthwalo wemfanelo:
Ukuhlukanisa ngobukhulu obuhlukahlukene;
Ama-screwdrivers aseSlotted nama-Phillips;
Izinamathiselo zokuphela kohlobo.
Ochwepheshe batusa kakhulu ukukhulisa inani lamathuluzi adingekayo, ukudala amaqoqo abo kanye namabhokisi okusebenza. Ngaphandle kwamathuluzi angenhla, lapho kubonakala khona ukugcina ibhayisikili ngokuzimela, lokhu okulandelayo kungaba usizo: abafaki bezinketho, okhulumela ama-key, ukuhlanza amabhulashi, ukugcoba izingxenye.
Ukuhamba ngebhayisikili njalo kudinga ukugcoba okuvamile kwezingxenye, okwenza kube nokusebenza okwanele kwazo zonke izindlela. Kulesi simo, umnikazi wezimoto ezimbili ezinamasondo kufanele aqondiswe yilokho kanye nesikhathi okufanele kusetshenziswe.
Ukugcinwa kwebhayisikili kufanele kwenziwe ngezimpahla ezilandelayo.
Ama-aerosols - asetshenziselwa ukucubungulwa kwamazinyo, izintambo, izintambo. Kuyafaneleka ezimweni lapho izingxenye zebhayisikili zidinga usizo oluphuthumayo lapho kungekho khona imibandela yokusebenza okugcwele.
Amafutha we-Liquid - asetshenziselwa ukucubungula i-hub yangemuva nebhayisikili. Ngokushesha kanzima lapho izinga lokushisa kwemvelo linciphisa. Ngakho-ke, akusebenzi kahle ekuhambeni kwasebusika.
Amagxolo amakhulu - afanele ukucubungula izintambo kanye nokuthela imihlangano.
Ukunakekela ifreyimu ukuyihlanza ekungcoleni bese uhlola umonakalo. Ngakho-ke, lapho uqhuba ibhayisikili, kubaluleke kakhulu ukuba ugeze uhlaka ngalesi siphuzo sesephu usebenzisa isiponji esithambile. Lokhu kuzokugwema ukugubha udaka kanye nayo yonke inhlobo yezinto zokulahla izimoto zebhayisikili.
Kuyadingeka ukuthi uhlole ngokucophelela ifreyimu lezinsipho kanye nemibimbi ebusweni bensimbi. Ukuba khona kwalowo monakalo omncane kuvame ukuholela ekuqhekekeni okuphelele nokungenakugwenywa kwefreyimu uma ushayela ezindaweni ezinzima noma ezinzima.
Ngokuvamile, amathayi aqukethe amamaki akhethekile abonisa izinga lokunconywa eliphakanyisiwe. Kule nkomba ukuthi kufanele uqondiswe ukuqhuma kwamathayi. Ukukhipha ibhayisikili, kubalulekile ukuhlola amathayi ngokucophelela kunoma yikuphi ukusika nokulimala.
Emabhayisikili anamuhla, amathayi awagcotshwa phezu kwentambo, kodwa ekuhambeni. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuhlola isimo sethambo kumathayi ngaphambi kokuhamba olunye uhambo.
Imvelo yokugcinwa kwekholomu yokuqondisa ibhayisikili incike ekutheni uhlobo lendlela. Ngaphambi kwekholomu edidiyelwe, ingxenye eyinhloko yalokho okuyizimboni zezimboni, sekuyisikhathi sokufaka esikhundleni se-lubricant ngendlela esifike ngesikhathi. Ngesikhathi esifanayo, ikholomu yokuhlanganisa ehlanganisiwe ngokuvamile idinga ukuguqulwa kwebhola elibhekene nokudala. Isibonakaliso esicacile sokushintshwa lapha kukhona ukubukeka kwe-squeak endaweni yengilazi yokuqondisa, kanye nokubukeka kobunzima ngokujika kwesondo.
Ukulungisa nokugcinwa kwamabhayisikili kuyinqaba kakhulu ngaphandle kokuhlola ukusebenza kahle kwepulaki. Iqoqo lezinqubo ezilapha lapha ngokuyinhloko lihloswe ukugcoba izinto ezikhona ngamafutha, ukuhlola ukusebenza noma ukufaka esikhundleni samanzi, izibhamu, amapistoni. Phakathi kwezinye izinto, izinyawo zivame ukudinga amafoloksi kanye ne-anther, ezithintekayo kakhulu ekungcoleni. Lapho usebenzela iforki yebhayisikili, kubalulekile ukuphatha ngokucophelela imithombo yamanzi.
Ochwepheshe abacebisi ukwehluza abagibeli abangenalwazi, ngoba lokhu kuyinkimbinkimbi kakhulu. Ngakho-ke, kungcono ukwethemba isevisi yalesi simiso kumphathi wezobuchwepheshe.
Ukugcinwa kochungechunge kuqukethe ukuhlanza kusuka ekungcoleni, ukulungisa ukungezwani, ukuqeda izixhumanisi ezingadingekile uma kwenzeka ukwelula. I-chain ingahlanjululwa nge-solvents ekhethekile noma ngamanzi asosi, kufanele kusetshenziswe i-flush ekhethekile.
Ukunakekela izigqoko kuhilela ukuhlanza indlela nokugcoba izigcoko. Njengoba idivaysi yama-dummies ihlangabezana nemithwalo engadingekile, kungenzeka ukuthi yenze isondlo sayo kungaphezu kwesisodwa ngenkathi.
Ukunakekelwa kufanele kuhokhwe hhayi kuphela ekusebenzeni kanye nemali yezimali, kodwa futhi nasemakhompheni, okumele agcozwe ngamafutha, okuqinisekisa ukushelela okushelelekile, okuphazamiseka phakathi kwendlela.
Ukugcinwa kwebhayisikili yezintaba kudinga ukuhlolwa okusemthethweni kwesimo se-bushings. Ukuze uhlole ukusebenza kwalezi zakhi, kwanele ukuthatha isondo ngethondo, bese ukuzamazama ukuqondisa kwe-axis. Ngaphambi kokuba kudlalwe, i-bushing ingahle isetshenziswe ngokusebenzisa izihluthulelo ezikhethekile ze-cone.
Lubricate ukuqhuma kunconywa ekuqaleni kwenkathi ngayinye. Ngezici eziningi, ukuphindaphinda kokufakelwa kwe-lubricant lapha kuncike ekutheni amandla nemodi yokusebenza kwebhayisikili.
Hlola umsebenzi wezinyawo ezilula kakhulu. Kwanele ukuyijikeleza eduze kwe-axis izikhathi eziningana. Ukushisa okungapheli, ukujikeleza okusheshayo kuyisibonakaliso sokugcoba kwezinga eliphezulu. Uma kunesidingo, i-bulkheads kanye nokufakwa kwezingubo zokugqoka, ama-pedals kumele aqedwe kusukela ekupheleni.
Ukugqoka ama-pake pads kungenye yezimbangela ezinkulu eziphuthumayo. Ukushintsha isicathulo kwenziwa uma kukhishwa kwabo ngaphambi kokubonakala kwesici squeal uma ucindezela amapayipi okuwaphula .
Isizathu sokuswebeka okubi kungase kube ukungcola kwama-brake noma amafutha emgqeni. Ngakho-ke, ukuqhutshwa kwezibhamu kufanele kuhlanjwe ngezikhathi ezithile ngesisombululo sesephu noma kuphucwe utshwala.
Ukugcinwa nokulungiswa kwebhayisikili kwenza kube lula ukwandisa impilo yakhe, futhi kuqiniseke ukuthi ukuhamba kahle kuhamba kahle nokuphepha komgibeli wamabhayisikili. Ukunakekelwa okuzimele njalo kwebhayisikili ngokuhamba kwesikhathi akuyona nje elula, kodwa futhi nenqubo emnandi, eyenza sikwazi ukuhambisa ngezinsizakalo zezobuchwepheshe.
I-carabiner "Los-7-1": ukubuyekezwa kwabanikazi, intengo, isithombe kanye nezici
Sula osenyameni evela ingono: omsakazo
Multiple sclerosis - isifo
Izici zokuthuthukiswa kwengane eminyakeni engu-4-5. Imisebenzi kanye nemidlalo nezingane